Imikhiqizo Okumele Ube Nayo 4 Ukuphunyuka Usuku Lwezinwele Olubi - Izinwele
Imikhiqizo Okumele Ube Nayo 4 Ukuphunyuka Usuku Lwezinwele Olubi
Izinsuku zezinwele ezimbi yizona ezine zokuphila kwethu! Noma ngabe kungenxa yokuthi ama-tresses ethu alangazelela ukuqokwa kwe-salon noma isimo sezulu sithinta impilo yayo, usuku olubi lwezinwele lunganciphisa imizwa! Kepha ungalawula ngokuqinisekile, uma kungenjalo kwendawo okuyo futhi izinwele zakho, ngale mikhiqizo engaqinisekisi.
Amalokhi asindayo, amakhulu ne-frizz adinga ukunakekelwa okwengeziwe. Awudingi nje kuphela ukunciphisa umonakalo odalwe yikama kodwa nokulawula i-frizz. Ama-tangle teezers ashelela ngokushelela ezinweleni zakho ngaphandle kokuthinta amafindo anenkani. La ma-combs awenzi umonakalo omkhulu ezinweleni zakho, agcina izinwele zijabule, ngokungafani namabhulashi ethu kaJane Doe Ngaphezu kwalokho, ama-tangle teezers eza ngosayizi nobukhulu bonke ukuze ukwazi ukuthwala kalula ukuthinta ama-SOS.
Ingabe i-shampoo ishiya izinwele zakho zibuthuntu futhi ziminyene? Ukungakhathazeki njengezinwele zezinwele kuzoba ngabalingani bakho ukubuyisa ukukhanya okhiye bakho ngenkathi uphazamisa amafindo. Ama-serum ezinwele akhansela i-frizz futhi anakekele ama-flyaways.
ILivon Serum inikeza isiphetho esifana nesalon ekusetshenzisweni kokuthunyelwe kwezinwele zakho. Ingxenye engcono kakhulu? Ungayisebenzisa noma nini nanoma kuphi, amaconsi ambalwa nje ezinwele ezimanzi futhi usukulungele ukuxubana.
3. I-Bobby Pin Kanye ne-'90s Scrunchies Izinsuku zezinwele ezimbi akudingeki ukuthi zisho izinwele eziyisicefe! Ungakhulisa ukubukeka kwakho ngama-scrunchie othandekayo kusukela kuma-90s nezikhonkwane ze-bobby ezithandwayo. Ukuhlanganisa izinwele zakho kuzothuthukisa ukugxila ngenkathi uqinisekisa ukuthi ubukeka kahle kuyo yonke leyo mihlangano eku-inthanethi.
Khetha ifindo eliphezulu bese ugoqa i-scrunchie esimnandi ukuyizungeza ukuze unikeze ukubukeka okuhlelekile. I-ponytail ephakeme noma ibhanana ephothiwe ephansi evikelekile nge-scrunchie ingathatha noma yikuphi ukubukeka njenge-notch ephakeme. I-pastel-hued noma igcwele iparele, khulisa ukubukeka ngokungeza isikhonkwane esisodwa noma ezimbili ze-bobby.
4. Amachilo ekhanda
Isimo sezulu esibuhlungu asivamisile ukuba nomusa kuma-tresses ethu yingakho badinga ukuvikelwa. Ukushintsha kwesimo sezulu kungalimaza izinwele zakho noma ungaphumi endlini.
Ezikhathini ezinjalo, ama-headscarves angaba ngumsindisi wakho, agcine izinwele zisendaweni ngenkathi engeza isici se-oomph ekubukekeni kwakho.Ungayinamathisela ku-tie-thayi yakho nge-ponytail ephansi noma uyiguqule ibe yibhande lekhanda ukugcina izinwele zihlehliswa emuva.
kanjani ukuqeda inkwethu nezinwele ziwe ngokwemvelo
amathiphu asekhaya wesikhumba esikhanyayo
amanye amathiphu wobuhle ebusweni
indlela engcono yokulawula ukuwa kwezinwele
izinwele zangaphambili zigundwe amantombazane